ဝိုး 2% ကနေ 12% အထိတောင် ဈေးလျှော့ပေးမဲ့ Laptop တွေပါလား???
နာမည်ကြီး Dell, Acer, Dynabook, Lenovo စတဲ့ Laptops တွေကို အထူးလျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်နော်။
Performance မြင့်မြင့်နဲ့ Laptops တွေချည်းပဲ ပါဝင်တာဖြစ်လို့ အားလုံးဈေးတက်နေတဲ့ ဒီကာလမှာ
ပရိုမိုးရှင်းအခွင့်အရေးလေးကို အကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့ အောက်ပါလင့်ခ်လေးကို နှိပ်လိုက်တော့နော်။
Newer Last Day!!! Hurry Up…